महान श्रीमानले हस्पिटलमै यसरी मनाइदिए अनिताको जन्मदिन ! यस्तो बन्यो माहोल (भिडियो) – नेपाली सूर्य
महान श्रीमानले हस्पिटलमै यसरी मनाइदिए अनिताको जन्मदिन ! यस्तो बन्यो माहोल (भिडियो)
November 6, 2020 November 6, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on महान श्रीमानले हस्पिटलमै यसरी मनाइदिए अनिताको जन्मदिन ! यस्तो बन्यो माहोल (भिडियो)
काठमन्डौ,महान श्रीमान भनेर सबैले चिन्ने बिनोद खड्काले आफ्नी बिरामी श्रीमतीको जन्मदिन हस्पिटलमै मनाइदिएका छन ।
भलादमी देखिने पुरुषहरू पनि घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुदाँहुँदै बाहिरी सम्बन्धमा रहने, श्रीमती र छोराछोरीलाई दुःख दिने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने गरेका घटना आजभोली दिनहुँ जसो बाहिर आइरहेका छन् । यद्यपि बाहिर आएका घटना एकाध मात्रै हुन् । दोब्बर, तेब्बर घटना भित्रभित्रै लुकाइन्छन् । इज्जतको डरले बाहिर ल्याइदैनन् ।
तर गुल्मी धुरकोट, पिपलधार घर भएका विनोद खड्का भने एउटा यस्ता उदाहरणीय श्रीमान् हुन्, जसले श्रीमान् हुनुको महत्व र कर्तव्य दुवै कुरा प्रमाणित गर्दैछन् । विवाहको मण्डपमा अग्नीलाई साक्षी राखी, सात फेरा घुमेर, सात जन्म संगै हुन गरेको कबुल अनुसार निर्देशित छन् । उनलाई देख्ने जो कोहीले भन्छन्, ‘श्रीमान् हुन् त यस्तो ।
२०७२ सालको बैशाख २४ गते विनोद र अनिता वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । त्यो मागी विवाह थियो । विनोद अहिले २७ वर्षका भ एभने अनिता २४ वर्षकी । उनीहरूको वैवाहिक जीवन राम्रोसंग चलिरहेको थियो । हाँसी खुसी थिए । विहेको २ वर्षपछि छोरी आहानाको आगमनले उनीहरूको खुसी झन् बढ्यो ।
२०७६ जेठ २९ गते भैरहवा युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा अनिताको अपरेसन भयो । अप्रेसन त भयो अस्पतालको ४ महिनाको बसाई पछि पनि अनितालाई पूर्ण निको भने भएन । ४ महिनाको बसाईमा १८ लाख खर्च भयो । अनिताको टाउकोको दिमाग छोप्ने खप्पर (skull)अझै भैरहवा अस्पतालमै छ । उनलाई निको भएपछि त्यो राख्न मिल्छ ।
विनोद भन्छन्, “दुःख पर्दा त हो नि हेर्ने । राम्रो हुदाँ त किन हेर्नु पर्यो र ?” उनको यो भनाइ नेपाली भनाइसंग पनि मेल खान्छ, – ‘श्रीमान्को गरिबीमा श्रीमती चिनिन्छे, श्रीमती बिरामी पर्दा श्रीमान् चिनिन्छ ।’ विनोदलाई सायद यो भन्दा धेरै अब चिन्नु पर्दैन । उनी असल मात्रै होइन, धर्मी श्रीमान् पनि हुन् ।
२४ घण्टामा ४५०० जना कोरोनामुक्त
मनोज गजुरेलकी पूर्वपत्नीको भावुक स्टाटसः तिमी सिकिस्त भएको सहनै नसक्ने रहेछु, अझै मैले उत्तिकै माया गर्छु तिमीलाई
कुलमानलाई प्रश्न- तपाईं हटेलगत्तै किन काटिन थाल्यो बिजुली?
अन्तत : भाईरल अर्जुन बिक हि’रासतबाट छुटे , प्र’काउ पर्नुको पछाडी यती ठुलो चलखेल (हेर्नुस् भिडियो)
January 28, 2021 Nepali Surya
११ बर्षदेखि कष्टकर जिन्दगी – बिस्तारामै दिसापिसाब, ढाडदेखि तल केहि छैन, शरीरभरी ४० टाका र खिला, यस्तो त आफ्नो सत्रुलाई पनी नहोस (भिडियो)